Tsy maninona ny habe raha te hanaiky isika na tsia. Na dia tsy mpankafy lehibe indrindra amin'ireo tambajotra ireo aza aho, rehefa mijery ny fifandraisako amiko - ireo sehatra lehibe indrindra dia izay andaniako ny fotoanako farany. Mahatonga ny fandraisana anjara ny laza, ary rehefa te-hanatratra ny tambajotran-tserasera misy aho dia ireo sehatra malaza ahafahako manatona azy ireo.
Tsy hanome torohevitra amin'ny mpanjifa na olona mihitsy aho mba tsy hiraharaha ireo sehatra media sosialy kely indrindra na vaovao indrindra. Matetika, tambajotra kely kokoa dia afaka manome anao fotoana ahafahana miakatra amin'ny laharana ary manangana fanarahana haingana. Tsy manana fifaninanana firy ny tambajotra kely kokoa! Ny loza mety hitranga dia ny mety tsy hahombiazan'ny tambajotra amin'ny farany - saingy na dia izany aza dia azonao atao ny manosika ny mpanaraka anao any amin'ny tambajotra hafa na mitondra azy ireo hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny mailaka.
Izany hoe, tsara foana ny manisy takelaka ny zava-mitranga ao amin'ny tontolon'ny media sosialy! Ity infographic avy amin'ny Visual Capitalist, Social Media Universe 202, manome fomba fijery tsara momba ireo sehatra media sosialy lehibe eto an-tany. Ary eto izy ireo:
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa a mpampiasa mavitrika isam-bolana dia tsy olona tsirairay. Maro amin'ireo sehatra ireo no manana kaonty mavitrika izay manindry ny atiny ho azy ireo amin'ny programa. Raha ny hevitro, tena nanakana ny kalitaon'ny fifandraisan'ny sehatra sasany izany. Twitter, IMO, no voa mafy indrindra ary farany mahatsapa ny faharatsiany ary mamafa ny kaonty bot tsy tapaka. Ary koa, ny Facebook dia nanomboka nanadio ireo pejy misy adihevitra avy amin'ny lampihazo hanatsarany ny kalitaon'ny resaka ary koa hampihena ny mety hisian'ny vaovao diso zaraina sy hampiroboroboana.